» प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकी नै हो त विजेता ?
प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकी नै हो त विजेता ?
२३ आश्विन २०७८, शनिबार २०:४५
मकवानपुर, २३ असोज । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को फाईनलमा पुग्ने पहिलो जोडीको घोषणा यही शनिबार हुँदैछ । गत शनिबार सविन आचार्य र रिता रावत क्षेत्रीसँग प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीले दोहोरी भिडेका थिए । यी दुबै टिमले गत साता कडा दोहोरी भिडन्त गरेका थिए । उनीहरुले दोहोरी भिडन्तका क्रममा दर्शक र निर्णायकहरुबाट प्रशंसा पाएका थिए । प्रकाश र मिनालाई धेरै दर्शकहरुले कमेन्टबाटै फाईनलमा पुग्ने जोडी भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।
तर निर्णायक मत र दर्शक भोटका आधारमा रिजल्ट हुने भएकोले उनीहरु फाईनलमा पुग्लान् भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रकाश र मिनाको जोडीलाई धेरै दर्शकहरुले अब बाँकी रहेका प्रतियोगीहरुमध्ये दोहोरी च्याम्पियनको एकमात्र हकदार रुपमा समेत टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । अन्य बलिया प्रतियोगीहरु भोटिङकै कारण पछि परेको भन्दै दर्शकहरुले अबको एकमात्र विजेताका रुपमा उनीहरु रहेको दाबी समेत गरेका छन् । मिनाको आवाज र प्रकाशको शब्द छनौटलाई सबैले प्रशंसा समेत गर्ने गरेका छन् । तपाईको विचारमा के प्रकाश र मिना दोहोरी च्याम्पियनको फाईनलमा पुग्लान् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा पुगेका दोस्रो जोडी हुन् प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकी । उनीहरुले उत्कृष्ट ८ को दोहोरी भिडन्तमा शोकै चर्चित जोडी अस्मिता डल्लाकोटी र जीवन सिग्देलसँग दोहोरी भिडेका थिए । उनीहरु दर्शक भोट र निर्णायक मतका आधारमा जीत हासिल गर्दै उत्कृष्ट ४ मा प्रवेश गरेका हुन् । यसअघि उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा प्रकाशलाई निर्णायक चन्द्र शर्माले थ्री स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए ।
त्यस्तै मिनालाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । त्यस्तै उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तका क्रममा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५६८ अंक प्राप्त गर्दै ७ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । उनीहरु दुबै जना लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् ।.गायक गायिकाकै रुपमा उनीहरु चिनिएका छन् । प्रकाश स्याङ्जाका हुन् । प्रकाशसँगै जोडी बाँधेर दोहोरी भिडिरहेकी गायिका मीना बुढाथोकी दाङकी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–